Kheyraadka - Creativos Online | Creativos Online (Bogga 3)
Xulashada 18 jeesjeesyada dharka ragga gebi ahaanba bilaashka ah oo wax laga beddeli karo qaabka PSD.
Xulitaanka sawirro qumman oo loogu talagalay Kirismaska ​​laga soosaaray Freepik.
Xulashada + 50 gebi ahaanba bilaash ah Adobe Photoshop motifs. Sii wad akhriska!
Xirmo bilaash ah oo kalandar ah si ay u bilaabmaan sanadka soo socda 2016. Sii wad akhriska!
Xulista 17 Jees Jees jees oo ku habboon kor u qaadista adeegyada iyo dalabyada.
Xulashada 8 bog oo laga soo dejisan karo astaamaha vector. Sii wad akhriska!
Xulashada in ka badan labaatan jees jees ah oo dharka dumarka ah oo qaab PSD ah. Sii wad akhriska!
Xulashada 8 plugins ee Adobe After Effects oo kaa caawin doona inaad sare u qaado waxqabadka arjiga.
Baro sawir qaadis 31 maalmood ah: Koorso bilaash ah
Baro sawirada 31 maalmood gudahood waa koorso bilaash ah oo kaa caawin doonta inaad hesho aqoon aad u ficil badan oo ku saabsan adduunka sawirada.
14 geedaha kirismaska ​​qaabka PNG (hufan)
Xulashada 14 geedaha kirismaska ​​ee qaabka png oo ku habboon dhammaan noocyada isku dhafka. Sii wad akhriska!
Xirmo Bilaash ah oo ah Badhannada Webka 50
Xulasho bilaash ah oo ka badan 50 badhannada websaydhka oo ku habboon qaabeynta mashaariicdaada. Sii wad akhriska!
40 Xayeysiis Kondom aad u qosol badan
Isku-darka xayeysiisyada qosolka badan ee ku saabsan cinjirka galmada. Sii wad akhriska!
Ma taqaan sawirka? Thanks to qalabkan waxaad soo dejisan kartaa dhammaan noocyada sawirrada adigoon ka tegin Adobe Photoshop.
Qaamuuska Yar ee Naqshadeeyaha: Ebook Bilaash ah
Qaamuuska yar ee naqshadeeyaha waa ebook bilaash ah oo kaa caawin doona inaad ka jawaabto dhammaan su'aalahaaga naqshadeynta.
30 loox oo pinterest kasta oo naqshadeeye waa inuu raacaa
Baro sabuuradaha ugu xiisaha badan Pinterest nashqadeeye kasta.
14 Saamaynta Qoraalka ee Kirismaska ​​oo bilaash ah
Xirmooyinka Qoraalka Kirismaska ​​ee loogu talagalay Adobe Photoshop. Noocyada qaabka PSD.
15 nooc oo kaamil ah Kirismaska
Xulashada 15 nooc oo kaamil ah oo loogu talagalay mashaariicda kirismaska ​​iyo kirismaska ​​sida hambalyada ama xaashiyaha. Sii wad akhriska!
Warbixinta Pantone Fall / Jiilaal 2015-2016. Sii wad akhriska!
Beddelashada dhijitaalka ah ee buugga 'pantone' si looga shaqeeyo dhammaan noocyada mashaariicda.
Raadinta sawirro bilaash ah? Gali PNGImg ​​oo soo dejiso kumanaan sawir ah.
Xulashada 7 plugins oo aad u xiiso badan si ay ula shaqeeyaan Prestashop. Sii wad akhriska!
Google wuxuu sii daayaa nuuca 2.1 ee ilaha furan ee astaamaha Naqshadaynta walxaha
Nooca cusub ee 2.1 ee astaamaha naqshadeynta agabka Google ayaa hadda loo heli karaa bilaash iyo ilo furan oo laga soo dejisto
Naqshadeynta naqshadeynta badeecada iyo hage bandhig
Tilmaamaha Naqshadeynta Naqshadeynta iyo Tilmaamaha Soo Bandhigidda waa buug aad u xiiso badan oo qaab PDF ah oo aan hubno inaad ka faa'iideysan doontid.
Toddobaadkan waxaan kuu keenaynaa saddex ilo cusub oo la xiriira adduunka xisaabinta, si shaqadaadu u leedahay taabasho farsamo
Isku-duwidda in ka badan 100 jees jees ah oo gebi ahaanba bilaash ah oo aad u faa'iido badan nooc kasta oo naqshad ah.
Toddobaadkan waxaan kuu soo qaadaneynaa font loogu talagalay naqshadeynta, waxaa lagu gartaa inay yihiin dad aad u qurux badan, gaar ahaan xarfaha waaweyn
In ka badan 100 sawir oo tayo sare leh oo ka yar 20 senti
Xirmo 100 tayo sare leh oo tayo sare leh qiimo jaban ... kaliya 20 senti! ma tabaysaa? Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato fursadda, halkan ka iibso.
Istuudiyaha Ramotion wuxuu ka muujinayaa Dribbble habka hal-abuurka astaanta ah sida Draplin uu sameeyay wax ka yar shan iyo toban maalmood ka hor.
Xirfad-xirfadeed: Mega-Pack ee kheyraadka lagu qiimeeyay $ 5000… kaliya $ 49!
Bixinta Super-Gaarka ah ee Creativos Online: Xirmooyinka Kheyraadka ee Naqshadayaasha Sawirka ee lagu qiimeeyay $ 5000 ee 49%! Miyaad seegaysaa? Ha ka waaban oo Iibso.
Waxaan falanqeynay 365psd, goob na siisa naqshado iyo ilo bilaash ah, iyo sidoo kale hab wanaagsan oo lagu raadiyo keydkeeda.
5 calaamadda dib u naqshadaynta oo luntay summadoodii oo aad loo dhaleeceeyay
Laga soo bilaabo xoqida, naqshadeeye Draplin wuxuu na barayaa sida loo qaabeeyo astaan ​​shirkadeed iyada oo loolanku ka yimaado Lynda.com
4 Xirmooyinka Kheyraadka Ganacsi ee Bilaashka ah: Mock-Ups, Warqado, Warqado, iyo Kaararka Ganacsiga
Xulitaanka afar baakad oo ilaha lacag la'aanta ah loogu talagalay ganacsiyada iyo shirkadaha: Mockups, brochures, flyers iyo kaararka ganacsiga.
20 sheybaar HTML / CSS oo bilaash ah
Xulashada labaatan shey html oo ku habboon wax ka beddelka muuqaalka iyo qaabka websaydhkaaga. Akhri si aad u soo dejiso iyaga!
Mawduucyo wax laga beddeli karo ayaa ku habboon xagaaga
Isku-duwidda qaab-dhismeedyo iyo gebi ahaanba bilaash ah si loogu isticmaalo mashaariicdeenna xagaagan.
Xirmo bilaash ah oo ilo iyo tusaalooyin leh saamaynta biyo-biyoodka
Xirmo bilaash ah oo ilo iyo tusaalooyin leh saamaynta biyo-biyoodka ku habboon xagaaga, nashaadaadka iyo mashaariicda hal-abuurka leh.
Ma waxaad ka shaqeyneysaa aqoonsiga shirkad? Hadday sidaas tahay, waxaad u baahan doontaa talo wanaagsan marka la sameynayo astaan. Sii wad akhriska!
Isku-darka toban tayo sare leh oo Adobe ah Ka dib Dhibaatooyinka furitaanka si loo soo bandhigo nooc kasta oo mashruuc ah.
Isku-dubaridka 60 astaamo aad u caqli badan oo kaa caawin doona inaad ku dhiirrigeliso markaad horumarinayso fikradaha iyo soo-jeedimaha cusub. Sii wad akhriska!
Xidhmada kheyraadka naqshadeeye sawir qaade ah oo ay ku jiraan in ka badan 20,000 oo qalab. Sii wad akhriska!
Liisku waa mashruuca cusub ee loo yaqaan 'Creative Commons' kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay is weydiistaan ​​oo ay isula adeegsadaan sawirro midba midka kale ka hooseeya liisanka hal abuurka 'Creative Commons Attribution'
Mega Pack of textures loogu talagalay Adobe Photoshop: 4.000 modalities ... Miyaad seegi doontaa?
Xulashada toban sheybaar oo bilaash ah oo tafatiri kara majaladaha Adobe InDesign Miyaad tabi doontaa iyaga?
Xirmo la yaab leh oo ka badan 70 saamiyada oo ah 91% dhimis. Miyaad seegaysaa?
Xulashada bilaashka ah ee kheyraadka xagaaga noocyadiisa kaladuwan oo ay kujiraan vectors, icons, arrimo iyo calaamadaha
20 bangiyada khayraadka aad u xiiso badan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha
Halkan waxaa ku yaal qaybo ka kooban 20 bog oo bixiya ilo kala duwan oo hodan ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha.
Ma u baahan tahay bangi muuqaal firfircoon leh, oo leh waxyaabo tayo sare leh? Hadday jawaabtu haa tahay, Unplash waa bartaada.
Waxaan soo bandhigayaa xirmadan weyn oo leh tiro badan oo tayo sare leh, oo ka badan laba kun oo gaar ah.
Xulashada labaatan baakad motif oo bilaash ah oo laga soo saaray websaydhka Freepik. Iyaga ku raaxee!
Xulista 70 falal bilaash ah oo si xor ah loo soo dejisan karo si looga isticmaalo barnaamijka Adobe Photoshop. Akhri si aad u soo dejiso iyaga!
Bog aad ka soo dejisan karto wax ka badan 45.000 walxo bilaash ah shineemo 4D. Miyaad seegaysaa?
+ 20 kheyraad maalinta hooyada
Aruurinta ilaha si loo horumariyo mashaariicda iyo nashqadaha loogu talagalay Maalinta Hooyada. Akhriso haddii aad raadineyso vectors!
+ 30 ilaha bilaashka ah ee qaabka 'hipster'
Xulashada in ka badan 30 ilo kala duwan oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha qaabdhismeedka qaabdhismeedka hipster-style.
Boggan waxaa ku jira in ka badan 1000 buraash oo bilaash ah oo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop.
12 xayeysiis tayo sare leh oo tayo sare leh qiimo dhimis 80% ah
Xirmo ka kooban 12 xaashi oo tayo sare leh iyo qaab yar oo qiimo dhimis ah 80%. Miyaad seegaysaa?
Astaamaha qumman ayaa isbeddelaya oo laga yaabee inay yihiin mid ka mid ah matalaadaha ugu madmadowga badan adduunka ee naqshada aqoonsiga shirkadaha.
Xulashada toban buug oo muhiim u ah xirfadlayaasha iyo ardayda ku xeel dheer xayeysiinta iyo suuqgeynta.
Xirmo lacag la'aan ah oo ka samaysan grunge qaabeeyayaasha oo ku habboon in lagu dalbado Adobe Photoshop dhammaan noocyada halabuurka.
210.000 farshaxan gacmeed bilaash ah oo uu dijitaaray Rijksmuseum
Rijksmuseum waxay ka heshaa ururinta dijitaalka bilaashka ah 210.000 shaqooyinka farshaxanka ah degelkeeda
+ 100 ilo bilaash ah makhaayadaha
Xulashada in ka badan boqol kheyraad bilaash ah oo loogu talagalay makhaayadaha sida vectors, sawirro, ama sheybaarro iyo boodhadh. Miyaad seegaysaa?
2 degello cusub si loo helo sawirro furan oo tayo sare leh sida Barn Images iyo Fancy Crave
Halkan ku soo dejiso dhammaan buugyaraha Adobe Flash ee ku qoran Isbaanishka gebi ahaanba bilaash iyo sidoo kale ebook ka socota UNED arjiga.
Isku-darka burushka bilaashka ah ee loogu talagalay barnaamijka Adobe Photoshop, oo ku habboon hawlaha qoraalka.
Xirmo in ka badan labaatan kheyraad guga oo bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka xushmadda Freepik.
Isku soo duubida farriimaha shaneemooyinka oo lacag la’aan ah si ay uga shaqeeyaan mashaariic cusub oo ay na dhiirrigeliyaan marka ay ka shaqeynayaan muuqaalka Mash-Up.
Xirmooyinka Kheyraadka oo lagu qiimeeyay $ 15.000… kaliya $ 79!
Kaydka Xirfadlaha: $ 15.000 Xidhmada Kheyraadka ee $ 79 kaliya. Kaliya loogu talagalay xirfadlayaasha iyo wakhti xaddidan! Dhamaan ilaha aad ubaahantahay.
10 waa inuu lahaadaa qalab loogu talagalay naqshadeeyayaasha si loo abuuro jeesjeesyo iyo silsilado silsilad ah oo bilaash ah iyo ikhtiyaarro lacag ah
10 nooc oo muhiim ah oo loogu talagalay naqshadeeye garaaf ah
10 nooc oo muhiim ah ama xarfo nooc naqshadeeye muuqaal ah maanta, kuwaas oo aad ka heli doontid aargoosatada ama helvetica
Ururinta bilaashka ah ee noocyada xirfadeed ee naqshadeeyayaasha shabakadda. Raadi isha saxda ah ee wax looga qaban karo mashaariicdaada iyo naqshadaha websaydhka.
Vecteezy waxay si gaar ah noola wadaageysaa xirmadan dhismaha iyo dhismooyinka astaamaha
Ururinta 900 oo ficil oo bilaash ah Adobe Photoshop. Xirmo wax ka badan 900 oo saameyn ah si aad u rakibto oo aad u dalbato arjiga. Miyaad seegaysaa?
Ururinta in kabadan 15.000 ilo bilaash ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop. Sannad guurada 25aad ee arjiga.
Kuwani 20 logos ee shirkadaha caanka ah waxaad ka heli kartaa fariimo kala duwan oo qarsoon oo xoojinaya qiimaha sumadda ay matalaan
Kaydka loogu talagalay xirfadleyda: 1000 sawirro tayo sare leh oo asal ahaan laga soosaaray
Kaydka loogu talagalay naqshadeeyayaasha xirfadleyda ah. Xirmo ka kooban in ka badan 1000 sawir oo tayo sare leh oo si fiican loo soo saaray.
4 shabakado fiidiyow oo furan oo tayo sare leh
4 websaydh oo aadan ka maarmi karin inaad kala soo baxdo il-furan furan oo tayo sare leh HD videos. Waxyaabaha muhiimka u ah shaqooyinka webka
9 e-buugaag bilaash ah oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka
Uruurinta sagaal e-buugaag bilaash ah oo ku habboon naqshadeeyayaasha garaafyada iyo maskaxda hal abuurka leh.
+ 20 ilo wanaagsan oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka
Uruurinta in kabadan labaatan kheyraad loogu talagalay Maalinta Jacaylka oo laga soosaaray Freepik. Weli ma ogi waxa kheyraad ah ee aad ku dari karto nashqadahaaga sanadkan?
Uruurinta in kabadan boqol nooc oo xirfadle ah oo loogu talagalay naqshadeynta websaydhka gebi ahaanba bilaash. Ma u baahan tahay ilo cusub si aad u horumariso shaqadaada?
+ 100 noocyada xirfadeed ee naqshadeynta websaydhka bilaashka ah (I)
Isku-duwidda bilaashka ah ee in ka badan 100 nooc oo xirfad-yaqaanno ah oo ku habboon naqshadeynta websaydhka.
20 ilo bilaash ah oo aadan ku seegi karin naqshadeeye ahaan
20 websaydh ah oo laga helo nooc kasta oo kheyraad ah, ha noqoto casharro, jeesjees, qoraallo, icons, sawirro, iwm.
Isku-duwidda buug-gacmeedka Adobe Dreamweaver dhammaan noocyadeeda iyo Isbaanishka. Ka soo degso bilaash ah 4shared.
Xirmo bilaash ah + 70 dillaac fudud iyo saameyn midab leh tayo sare leh
Xulka bilaashka ah ee iftiinka iftiinka HD iyo saameynta midabka ee naqshadeeyayaasha iyo sawir qaadayaasha. Ka soo dejiso 4shared!
Kusoo qaado xirmadan astaanta ah ee CSS minimalist ee bilaashka ah
Hel bilaash xirmadaan astaamaha CSS ee yar yar oo wax laga beddeli karo sida aad rabto sababo la xiriira qaabkeeda
Kirismaskan maxaa hadiyad ka wanaagsan intaad leedahay 20 bog oo tayo sare leh oo muuqaal sawir furan ah sida kuwa aan soo jeedinno maanta
10 kheyraad oo loogu talagalay Kirismaska ​​oo ka mid ah xirmooyin dulinka, astaamaha iyo qaababka aan ka maqnaan karin salaantaada kirismaska
Xirmo bilaash ah burush baraf ah oo loogu talagalay barnaamijka Adobe Photoshop.
BeeFree waa qalab weyn oo websaydh ah oo u sameeya astaamo adeegyada aad rabto inaad ku iibiso emayl ahaan.
Xirmada Qalabka Qalabka Google ee Bilaashka ah xushmadda DesignShock
Iconshock wuxuu na siinayaa xirmadan astaamaha naqshadeynta astaamaha oo bilaash ah
10 degel internet oo tayo sare leh oo loogu talagalay sawir qaadista ilaha furan
Kuwani 10 websaydhyada sawir-furan ee sawir-furan ee tayo sare leh ee shaqsiyeed iyo adeegsi ganacsi ayaa muhiim ah
Ciyaarta Belzier wixii hada ka dambeeya waxay noqon doontaa macalin dalwad ah oo kaa caawin doona inaad kaamil ahaato isticmaalka qalabka qalinka
8 ka mid ah noocyada ugu caansan uguna isticmaalka badan maanta
8 ka mid ah noocyada ugu caansan uguna badan ee ay adeegsadaan nashqadeeyayaasha iyo isticmaalayaasha caadiga ah
Uruurinta 12.000 astaamo xallin sare oo bilaash ah oo ku habboon naqshadeeyayaasha.
Xirmo ilmo iyo buraashyo burush ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop oo ku habboon shaqada astaamaha.
13 su'aalood oo la weydinayo macaamil kahor sameynta astaan
13 su'aalood oo aad isweydiiso inaad hesho dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka u ah marka ay tahay inaad qaabeyso astaan
Burush aad u qurux badan oo burush ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop oo leh fallaaraha iftiinka iyo walxaha iftiinka si ay uga shaqeeyaan mashruuc kasta.
Xirmooyinka Mega ee daruur buluug ah oo loogu talagalay Adobe Photoshop bilaash ah oo ku habboon ka shaqeynta qoraalka mashaariicdayada
In ka badan 45 nooc oo tayo sare leh oo bilaash ah oo gacan ka geysan kara mashaariicdaada shaqsiyeed ama ganacsi
Isku-darka seddex xirmo oo leh saameyn jaban oo ku habboon la shaqeynta codsiyada sida Adobe Photoshop, bilaash.
Isku-duwidda buug-gacmeedka Adobe Photoshop oo bilaash ah iyo Isbaanishka dhammaan noocyada.
Sida loo helo astaan ​​qaab vector ah oo ah summad caan ah
Mararka qaar astaanta qaab vector ah ayaa loogu baahan yahay shaqo kasta, waxaan ku tusineynaa sida loo helo mid leh qaabkan raadinta ee PDF-yada
Astaamaha Minimalist iyo Opensource iyo isticmaalka midabka madow waa afartan xarfaha oo leh tayo xirfadeed
Xirmo 11 qaabab biyo ah oo bilaash ah si aad ugu adeegsato nashqadahaaga oo aad u siiso shaqadaada taabasho ethereal ah
Uruurinta in kabadan konton asalka deegaanka dabiiciga ah. Ku habboon naqshadayaasha.
Xirmo bilaash ah: 40 Warqado wax lagu saxixi karo iyo Xaashida qaabka PSD
Xirmo afartan boodhadh xayeysiis ah iyo xaashi ah oo ku habboon bilowga adduunka naqshadeynta garaafka. Bilaash iyo tafatir.
Xirmo ka badan shan iyo toban boqol oo nooc oo naqshadeynta garaafka ah Uruurinta Gigantic oo noocyo badan oo nooc ah gebi ahaanba bilaash ah.
Aruurinta ilaha lacag la'aanta ah ee qaab mustaqbal ahaaneed ee muuqda. Ku habboon abuurista calaamadaha iyo boorarka xayeysiinta.
Xirmo ah 147 burush oo loogu talagalay Adobe Illustrator iyo tilmaamo si loogu rakibo si sax ah arjiga. Dhammaan waa bilaash!
InDesign arrimo loogu talagalay nashqadeynta tifaftirka
Maanta waxaan u nimid inaan kugu soo helno bogga khadka tooska ah ee loogu talagalay kaydinta kayd aad u tiro badan oo ah qaababka InDesign (bilaash iyo lacagba).
Xulashada tobanka fiidiyow ee bilaashka ah, qiimaha caymiska iyo hal abuurka. Ku habboon inaad na dhiirrigeliso ama xitaa annaga lafteenna u isticmaalno.
Jees-jebinta tayada sare leh ee ka yar € 10
Jeesjeesyada ugu qiimaha badan ee tayada leh ee aan u soo qaatay aqoonsiga shirkadeed oo ku dari kara kudar naqshadahaaga Xaqiiqdeeda ayaa xaqiiqdii kaa yaabin doonta!
12 Kheyraadka loogu talagalay Naqshadeynta Abka
Uma baahnid inaad ogaato sida loo barnaamij u abuuro codsi. Halkan waxaa ah 12 kheyraad oo loogu talagalay naqshadeynta barnaamijka, laga bilaabo tifaftirayaasha khadka tooska ah illaa dhiirrigelinta.
Ma rabtaa inaad dib u cusboonaysiiso buuggaaga kaydka ah ee 'Photoshop'? Waxaan kuu fududeyneynaa adiga, maanta waxaan kuu keenaynaa xirmo ...
Isku-darka saamaynta qoraalka si loogu tababarto barnaamijka oo loo siiyo boodhadhkeena shakhsiyadda lagama maarmaanka ah. Qof walba waa…
Adobe After Effects buuga arjiga ee Isbaanishka oo ay ku jiraan casharo, talooyin iyo tabaha.
Ma ka mid tahay kuwa dayacaya soo bandhigidda macmiilka? Hadda oo leh majaajillada aqoonsiga shirkadaha 36 (iyo in ka badan) qoraalkan, ma lihid cudurdaar
Haddii nashqadahaagu aad u siman yihiin oo aad u baahan tahay inaad nolosha ku soo qaaddid, qoraallada waraaqaha ee qoraalkan ku jira ayaa ah saaxiibkaaga ugu fiican (shatiga isticmaalka bilaashka ah).
Isku soo duub ballaaran oo ka kooban 77 nooc oo bilaash ah oo aan daabacnay intii lagu jiray 2014, dhammaantood isla boostada si deg deg looga dhigo mid deg deg ah. Ku raaxayso iyaga.
Xirmooyinka buraashka Photoshop si aad u soo dejiso bilaash. Ku habboon ka shaqeynta halabuurka leh biyo-biyoodka iyo qiiqa dabka.
Ma ka daashay raadinta cabbirada Facebook, Twitter, Google+ iyo YouTube-ka? Qalabkaan loogu talagalay Photoshop waad ku illoobi doontaa tan. Soo hel Xirmada Bulshada!
Fikradda ah abuuritaanka qoraalkaaga miyay ku jeceshahay? Ku naqshadeyso Glyphr, oo ah tifaftire qoraal ah oo bilaash ah. Sii wad akhriska oo soo hel codsigan.
Waxaad jeceshahay farriimaha bilaashka ah. Gali qoraalkan oo waxaad kahelaysaa 5 nooc oo 2014 ah abuurnimadii ugu dambaysay waana wax aan layaqaan. Hawo nadiif ah!
Maalin maalmaha ka mid ah wuxuu go'aansaday inuu bilaabo iskaanka dhammaan dukumiintiyadaas oo soo jiitay dareenkiisa waana taas sababta aad halkan uga heli karto sawirro buugaag gurto ah.
19 Bangiyada Sawirka Bilaashka ah
Ka hel boostadan 19 bangiyada muuqaalka ah oo aad ka heli karto sawirrada aad u baahan tahay, bilaash. Ma raadineysaa ilo muuqaal ah? Waad xiisaynaysaa.
Halkan waxaad ka heli doontaa 21 asal oo bilaash ah oo aad ugu isticmaasho shaqadaada. Sawirro shati bilaash ah oo adiga laguu adeegsado. Ka faa'iideyso iyaga!
Bishan Febraayo 14keeda waa inaad naqshad samaysaa. Halkan waxaan ku soo jeedineynaa 7 nooc oo loogu talagalay Maalinta Jacaylka si aad u soo dejiso bilaash. Iyaga ku raaxee!
Haddii aad tahay mid ka mid ah kuwa haysta qoraalo badan oo iskan leh, tani waa aaladdaada: Online OCR ayaa u rogeysa qoraalka la sawiray mid wax laga beddeli karo, si aad ugu raaxaysato. Akhriso!
Ku siinta awoodda lagama maarmaanka ah boodhadhka kaliya maahan arrin sawirro ah, ama midabbo. Taasi waa sababta aan kuugu keenayno 5 nooc oo bilaash ah. Iyaga ku raaxee.
8 Fonts Design Web Free
Haddii aad weli tahay mid ka mid ah kuwa u adeegsada Verdana ama Arial boggooda internetka, halkan waxaan ka soo jeedinaynaa inaad la qabsato 8-da nooc ee qaabeynta websaydhka.
7 nooc oo bilaash ah si aad u soo dejiso
Si aadan waqtiga uga luminin daalacashada iyo xulashada, waxaan kuu keenaynaa 7 nooc oo bilaash ah oo aad ku soo degsato iyadoo isha ku jirta.
10 nooc oo bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalkaaga iyo raaxeysigaaga
Mid ka mid ah waxyaabaha loogu doondoonista badan yahay ilaha naqshadeynta garaafka ayaa ah noocyo bilaash ah. Halkan waxaad ka heli doontaa 10 nooc oo aad u isticmaali karto sidaad doonto.
Barnaamijyada lagu hayo xisaabaadkaaga
Ma jiraan wax ka fiican oo aan ka dhigeyno xisaabinta xisaabinta si aan u ogaano waxa aan ku bixino iyo waxa aan galno. Waa kuwan 3 barnaamij oo bilaash ah oo la sameeyo.
5 Mockups si aad u soo bandhigto aqoonsigaaga shirkadda
Mockups waa mid ka mid ah ilaha ugu waxtar badan ee naqshadeeyayaasha garaafyada / websaydhka. Iyagu waa soo bandhigida xirfadeed ee ugu badan ee aan ku bixin karno shaqadeena.
Raadinta farriimaha bilaashka ah si aad u soo dejiso? Halkan waxaad ka heshay qormooyinka boostada ee ugu fiican. Jimce kasta, waxaan daabacnaa 5 nooc oo kala duwan oo bilaash ah. Ka faaideyso.
Mawduucan waxaan ku soo uruurineynaa 7 kheyraad muuqaal ah oo aad u kala duwan oo loogu talagalay Kirismaskaan oo waxtar kuu yeelan kara. Kubadaha, xiddigaha 3D, sumadaha, hadiyadaha ...
Xirmooyinka astaanta kirismaska ​​oo bilaash ah oo loogu talagalay dhammaan barnaamijyada
Waxaan ku sii wadaynaa ilaha sawirada kirismaska ​​oo bilaash ah. Munaasabaddan, astaamaha loogu talagalay barnaamijyada kala duwan.
Si aad ugu qurxiso websaydhkaaga ama faylalkaaga faahfaahin qayaxan oo tilmaamaysa kirismaska ​​hab khiyaano leh, wax ka roon ma leh xargaha qaabka .PSD ee aan maanta kuu keenayno!
Ku dar saamayn qoraal 3D gaar ah Photoshop wax ka yar laba ilbidhiqsi oo aan dhibaato lahayn. Maanta waxaan kuu keenaynaa koronto-dhaliye otomaatig ah.
Had iyo jeer asal cad maahan ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu dejin karo curiyaheena. Taasi waa sababta aan kuugu keeneyno boostadan ururinta lacago badan oo bilaash ah.
Qoraalkan waxaan ku soo qaadaneynaa in ka badan 16 ficil oo aad u faa'iido badan oo bilaash ah oo loogu talagalay Photoshop: ilkaha oo caddeeya, dib u soo celinta maqaarka, "Saamaynta Instagram"
Badhamada ku jira naqshadeynta websaydhka ayaa ah ilo muuqaal ah oo loo adeegsado in lagu soo jiito dareenka booqdaha. Sidaa darteed, qoraalkan waxaan kuugu keenaynaa 12 badhan oo bilaash ah.
Ma garanayno sababta, laakiin saameyntani way ina wada qanacsan tahay. Taasi waa sababta aan kuugu keeneyno boostadan xirmo ka kooban 94 bokeh si aad ugu isticmaasho shaqadaada.
Qoraalkan waxaan kuugu soo qaadaneynaa isku-dubarid saameyn qoraal ah oo wanaagsan oo loogu talagalay Photoshop, oo hadda jira iyo inaad u isticmaali karto naqshadahaaga casriga ah.
Qoraalkan waxaan kuugu keenaynaa 16 asal oo bilaash ah si aad naqshadeyntaada ugu dhigto meelaha qaarkood oo, sidaas darteed, aad u eegto inbadan. Qoryaha qalooca, folios ama saamaynta bokeh.
Kheyraadka Sawirka: 12 qaabab bilaash ah oo aad ku isticmaali karto naqshadahaaga. Qaabka .png, waxay noqon karaan cunsurka aad raadineyso inaad ku buuxiso boggaaga.
Xirmooyinka saamaynta Bokeh si loogu daro naqshadahaaga Kirismaskan
Haddii aad rabto inaad u tixraacdo kirismaska ​​qaababkaaga qaab dahsoon, qoraalkan waxaad kuheleysaa ilaha sawirada bilaashka ah ee aad raadineysay.
Astaamaha shabakadaha bulshada ayaa faa'iido leh maaddaama boggeena internetka lagu talinayo in marin looga helo bogga Facebook ee bogga
Noocyada kaladuwan ee noocyada bilaashka ah ee laga heli karo websaydhka ayaa si fiican loo yaqaan, taas oo macnaheedu yahay in naqshadeeyayaasha garaafku ay leeyihiin fursad weyn oo ay ku heli karaan oo keliya nooca ku habboon shuruudaha mashruucooda.
Astaantu waa qayb lama huraan u ah shirkad kasta, astaan ​​ama bulsho kasta, tan iyo markii ay bixiso qaybta muuqaalka ah ee u oggolaan doonta in la aqoonsado oo laga sooco dadka kale.
Waxaa jira waxyaabo badan oo ku lug leh shaqada naqshadeynta garaafka, laakiin shaki la'aan, qaababku waa kuwa aysan naqshadeeyayaasha sameyn karin la'aanteed oo dabcan waxay ku hayaan meel gaar ah oo ka mid ah ururinta kheyraadka iyo qalabka.
Kaararka ganacsigu waa aalad aad u fiican oo lagu shaaciyo shaqadeena laguna soo saaro faylalka macaamiisha mustaqbalka.
5 baako oo qaabab tayo sare leh loogu talagalay naqshadahaaga
Maanta waxaan kuu keeneynaa ilaha garaafyada bilaashka ah: 5 xirmo oo qaabab tayo sare leh loogu talagalay naqshadahaaga. 48 Sawirro oo kujira .jpg si aad ugu adeegsato uguna raaxeysato.
Sidee loo sameeyaa jeesjeesyo la'aan? Aad ufudud: ficillada (bilaash) loogu talagalay sawir-qaadista. Soo gal oo si taxaddar leh u akhri.
Boostada soo uruurisa xirmooyinka ugu fiican (iyo kan ugu ballaaran) ee lagu soo dejiyo bilaash. Adeegsiga shaqsiyeed iyo ganacsi. Sii wad akhriska!
5 qaabab tattoo oo bilaash ah
Faa'iidada qoraalka ayaa ah inay noo oggolaaneyso inaan helno naqshadaha noocyo badan oo kala duwan, sidaa darteed way fududahay in la helo nooc font ah oo ku habboon mashruuceena. Xaaladdan oo kale, maanta waxaan soo qaadaneynaa 5 nooc oo sawir-gacmeedyo tattoo ah oo bilaash ah si ay uga shaqeeyaan Photoshop una abuuraan sawirro qaab aad u gaar ah leh
Patternizer, matoor qaabeeye naqshadeynta websaydhka
Patternizer waa matoor qaabeeya oo kuu oggolaanaya inaad ku abuurto muuqaal ahaan isla markaasna aad ku ogaato lambarkooda CSS inay ku hirgeliyaan boggaaga.
Shan bangi oo lacag la’aan ah oo la adeegsado
Haddii aad rabto shaqo fiican, waxaad u baahan doontaa sawirro heer sare ah. Marka xigta waxaan kuu sheegi doonaa shanta bangi ee sawirka bilaashka ah ka jira webka.
5 degel oo aad kala soo bixi karto astaamaha bilaashka ah
Waxaan horey uga soo hadalnay muhiimada ay leedahay astaamaha qeyb ka ah mashruuc websaydh ah, sidaa darteed helitaanka xirmooyin ama astaamo tayo sare leh waxay caawin weyn u noqon kartaa naqshadeeyayaasha shabakadda.
Noocyo bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka ganacsiga bilaashka ah
Maanta waxaad nasiib ku jirtaa: waxaad dooneysaa inaad daahfurto bogga ugufiican si aad uhesho farriin bilaash ah oo loogu talagalay isticmaalka ganacsiga lacag la’aan ah. Faa'iido leh, sax?
Haddii aad horumarinayso goob adeeg oo aad u baahan tahay jadwal qiimeyn ah, markaa waa inaad fiirisaa midka uu naqshadeeyay Benoît Philibert.
Abaabulaha ayaa ah codsi kuu oggolaanaya inaad ku daawato boggaga internetka, faylasha HTML ee deegaanka, Faylasha Flash ama sawirada fudud ee aaladaha mobilada.
Soo dejiso Fira Sans, oo ah nooca loo yaqaan 'Firefox OS'
Haddii aad ka shaqeyneyso mashruuc oo aad rabto inaad ku adeegsato font bilaash ah oo furan dhexdeeda, ka dib fiiri Fira Sans ee Firefox OS.
Samee GIF, ka abuuri GIF animated fiidiyowyada YouTube-ka
Samee GIF waa aalad khadka tooska ah oo kuu oggolaaneysa inaad ka abuurto GIF-yada firfircoon fiidiyowyada YouTube-ka si dhab ah oo fudud oo dhakhso leh.
Muuqaal ahaan, ka soo saar midabyo midab leh sawir
Sawir gacmeedku waa aalad yar oo khadka tooska ah oo noo saamaxaysa inaan ka soo saarno midabbo muuqaal ah sawir. Isticmaalkeedu waa mid aad u fudud.
Emulator taleefanka gacanta, ku tijaabi bartaada aaladaha moobaylka ee kala duwan
Emulator-ka taleefanka gacanta ayaa noo sheegaya sida boggeena ugu eg yahay qalabka sida iPhone 5, Samsung GT i9100 ama HTC Touch Diamon.
7 casharro la yaab leh oo lagu daro saamaynta qoraalka ku jira Sawirka
Soo bandhigida ururinta toddobo casharro cajiib ah oo loogu talagalay ku darista saameynta qoraalka Sawirka. Iyagu waa kuwa ugu noocyada iyo tayada fiican.
10 kaararka ganacsiga ah si ay kuugu dhiirrigeliyaan
Kaararka ganacsigu muhiimad weyn ayey u leeyihiin macmiilka, waa warqadiisa daboolida. Halkan ku dhiirrigeliso xulashada 10 kaararka ugu fiican.
The Mac Font Catalog: Casharrada Aasaasiga ah
Cashar barasho aasaasi ah oo si sax ah loogu adeegsado Khariidadda Foomka ee Mackeennu keeno asal ahaan. Baro inaad sifiican u maamusho qoraalkaaga.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa ururinta yar ee sharafta sumcada caanka ah ee soosaarida mala awaalka ragga ee Maentis. Runtii way fiican yihiin.
Maki, xirmada sumadda maabka mareegaha
Maki waa xirmo 93 icons ah oo loogu talagalay khariidadaha mareegaha, oo waxtar u leh ku darista calaamadaha goobta iyo qodobbada xiisaha leh. Gabi ahaanba waa bilaash waana tayo aad u wanaagsan.
Soo deg xirmada ugu horreysa ee astaamo si gaar ah loogu talagalay macruufka 7 gebi ahaanba bilaash. Waxaa jira 142 astaamo vectorized ah oo si xor ah loogu isticmaali karo shaqadaada.
Soo bandhigida ururinta 1.262 astaamo gebi ahaanba bilaash ah monochrome minimalist. Waxay u muuqdaan kuwo ku habboon qaabeynta isdhexgalka.
Waxaan kuu soo bandhigeynaa shan asal oo aan la taaban karin oo loo isticmaali karo mashruuc kasta, mid shaqsiyeed iyo mid ganacsi, ama si fudud oo kale sida warqadda.
Waraaqaha loogu talagalay Jacaylka
Waxaan kuu soo bandhigeynaa ururinta yar ee asalka desktop-ka si aad ugu qurxiso kumbuyuutarkaaga 14-ka Febraayo, Maalinta Jacaylka.
Xulka shaashadda isboortiga ee 2D
Xul xul ah sawirada silhouettes-ka isboortiga ee naqshadaha 2D
Dareemaha bilaashka ah ee mashaariicdaada
Qaabab kala duwan oo lacag la'aan ah si aad u abuurto qolalkaaga macluumaadka aad heli karto markaad fulineyso mashaariicdaada
Ku soo dejiso sawirro buufin leh qaabab yaab leh
Generator-ka CSS3 Gradient Generator waa aalad khadka tooska ah noo saamaxeysa in aan u soo saarno shaashadda midabka CSS3 ee biraawsar kasta.
18 cadayasho indho macquul ah oo bilaash ah si aad xaqiiqada ugu hesho indhaha sawiradaada dhijitaalka ah
Xirmooyinka Icon ee Tattoo 35 Animal & Tribal
22 qoraal asal ah oo hal abuur leh
Ururinta 22 nooc oo bilaash ah oo hal-abuur iyo asal ah si loo soo dejiyo
Mid ka mid ah ilaha aad inta badan dalbato waa noocyada bilaashka ah, taasina waxay leedahay uruurinta xarfaha wanaagsan ...
Waa fekerkeyga shaqsiyadeed, laakiin waxaan u maleynayaa inay waxyar idinka tahay dhammaantiin inta badan soo mara ...
50 Kaadhadh Ganacsi oo Si fudud Cajiib ah
Qofka had iyo jeer la shaqeeya macaamiisha waa lagama maarmaan inuu haysto kaar ganacsi oo wanaagsan, maxaa yeelay ...
24 Noocyada astaamaha yar yar ee diyaar u ah soo dejinta
Sawirradu had iyo jeer waa la soo dhaweynayaa gelitaankana aan idiin soo bandhigi doono galabnimadii Isniinta waxba idinma soo bandhigo ...
30 Naqshadeeye Xirfadlayaal
Caadi ahaan astaan ​​kasta oo uu sameeyo naqshadeeye caan ah ayaa badanaa xiiso u leh in wax laga barto, laakiin haddii aan ka hadalno ...
Waa inaan qiraa haddii aan ku qasbanahay inaan naftayda dejiyo inaan wax badan ka qaban doono astaamaha aan ku jirin qorista, laakiin maya ...
12 Burush Caleenta Geedaha Dabiiciga ah oo Noocyo kala duwan ah
5 Burush oo leh qaabab waraaqo ah
Haddii aad jeceshahay naqshadeynta, waxay u badan tahay inaad la dhacsan tahay kaararka ganacsiga ee si fiican loo sameeyay, waana ...
Xirmo aad u dhameystiran oo ah astaamo bulsheed oo madow iyo caddaan ah oo yar oo leh Pinterest ayaa lagu daray
isbedelka astaamaha olombikada taariikhda naqshadeynta
10 Far waaweyn oo Bilaash ah
Naqshad aad u weyn ayaan waxtar lahayn haddii marka la isticmaalayo font aan sameynno xulasho qaldan, wax ...
Nooca Naqshadayaasha: Tom Carnase, Herb Lubalin, iyo Morris Fuller Benton